Bhizinesi kune Bhizinesi Imwe Kushambadzira | Martech Zone
Chipiri, Kurume 19, 2013 Chipiri, Gunyana 17, 2013 Douglas Karr
Imwe yemikana yeBusiness kune Bhizinesi (B2B) vatengesi ndeyekutora traffic kune vanhu vari kutsvaga dzimwe nzira. Vanhu vari kutsvaga zvekutenga zvekushandisa kana kuti havasi kufara uye vanoshuva kusiya mutengesi - vachishandisa mazwi senge imwe nzira ye, kana Similar to, kana zvinoshandiswa senge kutsanangura kutsvaga kwavo.
Heino muenzaniso wakanaka - kutsvaga kwe dzimwe nzira dzeWufoo:
Formstack yakatora mukana weuyu mukana wekutsvaga nekugadzira iyo rakasarudzika peji rinotsanangura musoro kumusoro misoro yekushandisaformstack pamusoro peWufoo. Uye, hongu, sezvo peji racho rakanyatsoenderana ivo vanoremekedza zvakanyanya kwariri. Ini ndaikurudzira chero mushambadzi kuti aburitse mapeji emukati anofananidza uye nekusiyanisa kwavo kunyorera kumakwikwi avo. Ingova wakaringana kuitira kuti iwe usawane chako chigaro chakapihwa kwauri! 🙂
Pamusoro pezvo, kune akawanda madhairekitori kunze uko kuti uve nechokwadi chekuti wakanyorwa:
alternativeTo - dhairekitori hombe yeimwe software ine yakatanhamara chinzvimbo neinjini dzekutsvaga (kunyangwe ini ndichiwana iwo masanjera ekunyorera uye mhedzisiro kazhinji zvisiri zvechokwadi).
Serchen - injini yekutsvaga yekutsvaga mashandisirwo egore… inosanganisira ongororo.
GetApp - bhizinesi software yekuongorora saiti yekutsvaga kunyorera.
moreofit - dhairekitori saiti inowana mawebhusaiti akafanana. Izvi zvakare zvinosanganisira gore uye Software seSevhisi kunyorera.
ZvakafananaSiteSearch - imwe dhairekitori saiti inowana mawebhusaiti akafanana. Izvi zvakare zvinosanganisira gore uye Software seSevhisi kunyorera.
Ive neshuwa yekutora mukana nekutsvaga uku paunenge uchisimudzira bhizinesi rako nyowani. Vaka mapeji akagadzirwa mukati akakwirira anosimudzira ako ekushandisa pamusoro pevanokwikwidza. Ini ndaizovaka peji kune yega yevanokwikwidza vepamusoro. Pamusoro pezvo, ita shuwa kuti ako ekushandisa akanyorwa mune dziri pamusoro dzimwe nzira dzekutsvaga uye madhairekitori Une chero mamwe madhairekitori aungakurudzira? Wedzera ivo mune zvakataurwa!
Tags: imwe softwareimwe nzira yeinjini dzekutsvagakunyorera kunotsvagab2bb2b dzimwe nziraSimilar to